Mowjadaha tamarta ama tamarta mowjada | Cusbooneysiinta Cagaaran
Daniel Palomino | | Tamarta Wave, General, Deegaanka
Mawjadaha baddu waxay leeyihiin tamar fara badan ka soo baxa dabaysha, si dusha sare ee badda loogu arko a ururiyaha tamarta dabaysha.
Dhinaca kale, badaha ayaa qaata xaddi badan oo tamarta qorraxda ah, kaas oo sidoo kale gacan ka geysta dhaqdhaqaaqa socodka badda iyo hirarka.
Mawjaduhu waa hirar tamar ah la soo saaray, sidaan horeba u idhi, dabaylo iyo kuleylka qorraxda, ee lagu kala qaado dusha sare ee dusha sare ee badaha oo ka kooban dhaqdhaqaaq toosan iyo jiif ah oo meco-biyoodka ah.
Biyaha u dhow dusha sare uma eka oo kaliya inay kor u wareegaan kor, oo ay la socdaan marinka carada (waa qeybteeda ugu sareysa, badanaa lagu buuxiyo xumbo) iyo sanka (qeybta ugu hooseysa ee mowjadda), laakiin, tartiib tartiib ah, sidoo kale horay ugu sii soconaya dusha sare ee mowjadda iyo dib u laabashada laabta.
Sidaa darteed molikuyuullada shaqsiyeed waxay leeyihiin dhaqdhaqaaq wareegsan oo wareegsan, kor u kacaya marka qallalku soo dhowaado, ka dibna horay loogu sii wado qarka, hoos u dhaca markay gadaal u socdaan, iyo gadaal mowjadda dhexdeeda
Mawjadaha tamarta ee dusha sare ee badaha, hirarka, waxay safri karaan malaayiin kilomitir iyo meelaha qaarkood, sida Waqooyiga Atlantik, xaddiga tamarta keydsan waxay gaari kartaa 10 KW mitir laba jibbaaran oo badweyn ah, taas oo ka dhigan lacag aad u tiro badan haddii aad tixgeliso cabbirka dusha sare ee badda.
Meelaha badweynta leh caddadka ugu badan ee tamarta ku ururay mawjadaha waa goboladaas ka baxsan 30º loolka iyo koonfurta, markay dabayluhu ugu xoog badan yihiin.
Sawirka soo socda waxaad ku arki kartaa sida dhererka mowjaddu u kala duwan yahay iyadoo ku xiran badda hoosteeda iyadoo loo eegayo sida ay dhulka u tahay.
1 Ka faaiidaysiga tamarta mawjada
2 Kaydka tamarta mawjadaha badda
3 Adeegsiga dhaqdhaqaaqa
3.1 Doqda Cockerell
3.2 Duck Cusbada
3.3 Jaamacadda Lancaster Airbag
3.4 Jaamacadda Bristol dhululubo
4 Tooska isticmaalka mowjadda
5 Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka hirarka
Ka faaiidaysiga tamarta mawjada
Tiknoolajiyadda noocan ah waxaa markii hore laga shaqeeyay oo la hirgeliyay 1980-meeyadii, waxayna lahayd soo dhaweyn weyn, iyada oo ay ugu wacan tahay astaamaha la cusboonaysiin karo, iyo jiritaankiisa baaxadda leh hirgelinta mustaqbalka dhow.
Hirgelinteedu sidoo kale waxay noqoneysaa xitaa mid sii shaqeynaysa inta udhaxeysa 40 ° iyo 60 ° sababo la xiriira astaamaha mowjadaha.
Sababtaas oo kale, isku day ayaa la sameeyay muddo dheer si loogu beddelo dhaqdhaqaaqa toosan iyo toosan ee mowjadaha tamar loo isticmaali karo aadanaha, guud ahaan tamarta dabaysha, in kasta oo mashaariic sidoo kale la fuliyay si loogu beddelo dhaqdhaqaaqa farsamada.
Mashruuca kajawaabinta jasiiradaha Canary
Waxaa jira aalado badan oo kala duwan oo loogu talagalay ujeedooyinka noocaas ah, oo laga dhex heli karo Xeebaha, badaha sare ama ku liqday badweynta.
Waqtigaan la joogo, tamartaan waxaa laga hirgaliyay dalal badan oo horumarsan, sidaa awgeed waxaa lagu gaarayaa faa iidooyin weyn dhaqaalaha wadamada la sheegay, tan waxaa ugu wacan boqolkiiba sare ee tamarta la bixiyo ee la xiriirta wadarta tamarta loo baahan yahay sanadkiiba.
Dalka Mareykanka waxaa lagu qiyaasaa in agagaarka 55 TWh sanadkii waxaa lagu beddelaa tamar ka timaadda dhaqdhaqaaqa hirarka. Qiimahaani waa 14% wadarta qiimaha tamarta ee dalku sanadkii dalbado.
Iyo in Europa waa la ogyahay in agagaarka 280 TWh Waxay ka yimaadaan tamarta ka dhalatay dhaqdhaqaaqa hirarka sanadka.
Kaydka tamarta mawjadaha badda
Meelaha ay dabaylaha ganacsiga (Dabayluhu waxay u dhacaan si isdaba joog ah xagaaga, cirifka woqooyi, iyo in ka yar xilliga qaboobaha. Waxay ku wareegaan inta u dhexeysa kuleylaha, laga soo bilaabo loolka 30-35º dhanka dhulbaraha. Waxaa laga hayaa cadaadiska kuleylka sare, dhanka cadaadiska hoose ee dhulbaraha. dhaqdhaqaaqa hirarka, waad awoodi kartaa dhisaan kayd biyo ah oo leh derbi jaban la taaban karo oo u jeedda badda, taas oo ay hirarka ku dul socon karaan si ay ugu ururaan kaydka biyaha oo u dhexeysa 1,5 ilaa 2 mitir oo ka sarreeya heerka badda.
Biyahaan waa la rogi karaa, waxayna u oggolaan kartaa inuu ku laabto badda, si loo soo saaro koronto.
Kordhinta iyo hoos u dhaca mawjadaha, meelaha qaarkood oo tikniyoolajiyaddan lagu dabaqi karo, aad bay u yar yihiin, sidaa darteed ma soo saari doonto wax faragelin ah.
Meelaha xeebta ku teedsan ee mowjaduhu leeyihiin awood badan oo uruursan, hirarka waxaa lagu hagi karaa baloogyo shub ah oo lagu xiray badda furan, kuwaas oo ku ururso ku dhowaad dhammaan tamarta mowjadda hore 10 kiiloomitir ballaadhan aag yar oo ballaciisu yahay 400 mitir.
Mawjadaha kiiskan waxay lahaan lahaayeen dherer dhan 15 illaa 30 mitir markii ay u dhaqaaqayaan dhanka xeebta, sidaa darteed biyuhu waxay si fudud isugu uruuri karaan kayd biyood oo ku yaal meel dherer ah.
Marka lagu sii daayo biyahan badda, korontada waxaa lagu soo saari karaa iyadoo la adeegsanayo qalabka caadiga ah ee korantada.
Waxaa jira qalab kala duwan oo noocan ah.
Sawirka soo socda waxaad ku arki kartaa mid si ficil ah loo adeegsaday oo keenay natiijooyin aad loogu qanco.
Waa nidaam loogu talagalay ka faa'iideysiga tamarta mowjadaha oo hawlgalkeedu aad u fudud yahay kana kooban kuwan soo socda:
Mawjadda kor u socota wuxuu dhisaa cadaadiska hawada gudaha dhismaha xiran. Sida saxda ah waa isku mid sida haddii aan riixno siliinge.
Fallaabooyinku waxay "ku qasbayaan" hawada inay maraan marawaxadaha si ay u rogto oo u dhaqaajiso koronto dhaliyaha, iyadoo soo saareysa tamar koronto.
Markay mowjadu hoos u dhacdo way soo saartaa niyad jabka hawada.
Feelalku waxay mar kale "ku qasbayaan" hawada inay maraan marawaxadaha isla jiho tii hore, oo ay marawaxadu dib ugu soo laabato wareegeeda, waxay dhaqaajisaa koronto dhaliyaha waxayna sii wadaa inay soo saarto koronto.
Mabda 'isku mid ah ayaa lagu dabaqay Markab Kaimei oo ay ku shaqeyso matoor hawadeed oo cufan, mashruuc wadajir ah oo ay iska kaashanayaan dowladda Japan iyo Wakaaladda Tamarta Caalamiga ah.
Natiijooyinka mashruucan waxay ahaayeen kuwa wax soo saar leh, in kasta oo isticmaalkiisu uusan noqon mid baahsan.
Tiknoolajiyad isku mid ah ayaa dhowaan la adeegsaday, laakiin la adeegsanayo baloogyo shubka waaweyn oo sabbaynaya, mashruuc laga dhisay Scotland.
Waxaa jira qalab kale oo sidoo kale u wareeji dhaqdhaqaaqa kor iyo hoos mowjadda si loo soo saaro koronto sida:
Qalabkani wuxuu ka kooban yahay fiiq-fiiq-fiiq leh oo laalaada marinka hirarka, sidaas awgeedna looga faa'iideysanayo dhaq-dhaqaaqa inuu wado mashiinka hawo-mareenka.
Midda kale ee sida fiican loo yaqaan waa shimbir cusbo, oo ka kooban taxane isdaba-joog ah oo ah qaabab oval u eg oo horay iyo gadaal u sii socda, markii "hirarka" hirarka ku dhacaan.
Barkinta hawada ee Jaamacadda Lancaster
Barkinta shilku waxay ka kooban tahay 180 mitir tube dheer oo ka kooban qaybta caagga ah. Markay mowjaduhu kor u kacaan oo ay soo dhacaan, hawo ayaa loo jiidayaa qaybaha bacda si loogu wado marawaxadaha.
Jaamacadda Bristol dhululubo
Dhululubadani waxay leedahay qaab u dhigma sida foostada dhinaceeda la dhigo oo isla markiiba dul sabeysa dusha sare. Foostadu waxay ku wareegeysaa dhaqdhaqaaqa mowjadaha, iyagoo jiidaya silsilado ku xiran bambooyin haydarool oo ku yaal badda hoosteeda.
Tooska isticmaalka mowjadda
La tijaabiyey nidaamyada kale si toos ah looga isticmaalo dhaqdhaqaaqa kor iyo hoos ee hirarka.
Mid ka mid ah, ku saleysan dhaqdhaqaaqa hoonbarrooyinka iyo nibiriga, waxaad ka arki kartaa jaantuskan.
Mabda'a hawlgalka waa mid aad u fudud oo ka kooban kuwan soo socda:
Markay mowjadu kacdo oo ay riixdo fin, taas oo u dhexeysa 10 iyo 15º.
Marka xigta, finku wuxuu gaadhaa dhamaadka safarkiisa mawjaduna way sii kordheysaa, halkan waxaa jira riixitaan kor u kaca ah oo mowjadda ah in finku isu beddelayo gadaal gadaal.
Goor dambe, markii mawjaddu hoos u dhacdo, ganaaxa ayuu hoos u dhaqaajiyaa isla dhacdadanina waxay la mid tahay dhacdadii hore.
Haddii ay doontu leedahay nidaamyo noocan ah, waxaa ku riixaya saameynta mowjadaha iyada oo aan la cunin inta ugu yar ee tamar ah.
Tijaabooyinka tijaabada ah ee nidaamkani waxay ahaayeen kuwo lagu qanco, in kastoo sidii kiiskii horeba, isticmaalkiisa aan la soo qaadin sidoo kale.
Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka hirarka
Tamarta hirarka ayaa leh faa'iidooyin waaweyn sida:
Waa isha laga helo tamarta la cusboonaysiin karo oo aan lagu qiyaasi karin miisaanka aadanaha.
Saameynteeda deegaanka waa ficil ahaan, haddii aan ka ahayn nidaamyada ku ururinta tamarta mawjadaha dhulka.
Xarumo xeebeed badan ayaa noqon kara lagu dhex daray dhismayaasha dekedda ama nooc kale.
Feejignaanta kuwan waxay leedahay Faa’iido darrooyinka qaarkood, qaar ka muhiimsan ayaa ah:
Nidaamyada guuritaanka Tamarta mawjadaha dhulku waxay yeelan kartaa xoog saameynta deegaanka.
Waa ku dhowaad si gaar ah looga isticmaali karo wadamada warshadaha horumaray, maxaa yeelay xukun mowjad wanaagsan ayaa si dhif ah looga helaa dunida saddexaad; Tamarta mowjadu waxay u baahan tahay maalgashi raasamaal sare ah iyo saldhig farsamo oo aad u horumarsan oo aan dalalka saboolka ahi lahayn.
Hirar tamar ama hirar lama saadaalin karo sida saxda, maaddaama mawjadaha ay ku xiran yihiin xaaladaha cimilada.
Inbadan qalabka ku xusan weli waxay leeyihiin cillad waxayna la kulmayaan cilado farsamo oo adag.
Xarumaha xeebaha waxay leeyihiin a saameyn muuqaal ah oo weyn.
Xarumaha dibedda aad bay u badan tahay adag si loogu gudbiyo tamarta laga soo saaray dhulweynaha.
Xarumaha waa inay adkeysato xaaladaha aadka u daran muddo dheer.
Mowjadaha waxay leeyihiin istiraatiijiyad sare iyo xawaare xagal hooseeya, oo ay tahay in loo beddelo dardar yar iyo xawaare xagal sare leh, oo loo isticmaalo ku dhowaad dhammaan mashiinnada. Nidaamkani wuxuu leeyahay a waxqabad aad u hooseeya, adoo adeegsanaya teknoolojiyada hadda jira.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Tamarta Wave » Hirar tamar ama mawjad tamar